PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-29 - Imibutho eyi-585 kuvoto luka2019
Imibutho eyi-585 kuvoto luka2019
IKOMISHINI yezoloNyulo eZimeleyo (IEC) eMpuma Koloni iveze ukuba yimibutho yezopolitiko ekumakhulu amahlanu anamashumi asibhozo anesihlanu (585) eza kungenela unyulo lonyaka ozayo. Kule mibutho, ishumi elinesibhozo (18) kuyo iseMpuma Koloni. Kodwa eli nani kulindeleke ukuba lonyuke nanjengoko kukho imibutho yezopolitiko emitsha ekumashumi amathathu anesithathu (33) esele ibonakalise umdla kolu nyulo.
Umbutho ngamnye uhlawula iR200 000 xa ufuna ukungenela unyulo kuzwelonke, ze ibeyiR45 000 kunyulo lwamaphondo.
Ethetha eRegent Hotel eMonti izolo, usomaqhuzu weIEC ephondweni, uKayakazi Magudumana uthe: “Kuluhlu lwethu lovoto eMpuma Koloni sinabantu abakwi-3.3 yezigidi, eli nani litshintsha mihla le kuba abantu bayemka ephondweni abanye bayafika. Sisenabo abantu abakuma-188 000 abangenazo iidilesi kuluhlu lovoto. Eli linani elingabonakala lilincinane, kodwa linani ekufuneka silehlisile.”
UMagudumana ubongoze uluntu lutyelele iiofisi ze-IEC kwiindawo zabo ukubhalisa iidilesi zabo okanye ukuqinisekisa ubume babo kuluhlu lwabavoti.
Umhla wamashumi amabini anesithandathu (26) namashumi amabini anesixhenxe (27) kwinyanga yoMqungu, ubekelwe ukuba kubhaliswe kwakhona ngabakwilungelo lokuvota. UMongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba abhengeze kweyoMdumba olona suku lovoto.
UMagudumana wenze isimemelelo ebongoza urhulumente wephondo ukuba ancedisane nabo ukuqinisekisa ukuba bafikelela kuzo zonke izikhululo zovoto kweli phondo.
UMagudumana uthi kwizikhululo zovoto zaseMpuma Koloni ezikumawaka amane anamakhulu asixhenxe anamashumi alithoba anesithoba (4 799), izikhululo ezingamakhulu amahlanu anamashumi asixhenxe anesithathu (573) azinambane, ezingamakhulu amane anamashumi amane anesixhenxe (447) azinamanzi, logama ezingamakhulu amabini anamashumi amathandathu anesibhozo (268) zingenazindlu zangasese ze ezingamashumi amane anesixhenxe (47) zingabinamsinga wokufikelela kunxibelelwano likanomyayi.
Noxa kunjalo, uMagudumana uthi bayazenza iinzame zokuba zibe khona ezi nkonzo, kodwa watsho ebongoza abasemagunyeni ukuba bawusele iso lo mba.
“Akumnandanga kuthi ukuya kugxumeka indlu yangasese usuku olunye lovoto, emva koko sihambe nayo xa sigqibile, okungathi abantu bendawo abayifuni kubomi babo bemihla ngemihla,” utshilo uMagudumana.